National/Nationalism ဟာ Race/Racism ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု မဟုတ်ပါဘူး။ Patriotism ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့လည်း လုံးဝ မပတ်သက်ဘူး။ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မန္တလေးမြို့မှ အိုးဘို ဗလီဝတ်ကျောင်း King Mindon donated the un-used TEAK-PILLARS for North Oh Bo Masjid
Sit Khwe Kyaw Ne Win, grandson of Burmese-Chinese Dictator Ne Win »
Nationalism ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်သူ့သြဇာမှ မခံဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်လိုတဲ့ ဆန္ဒ၊ အဲလို ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှုကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်သလို ဆင့်ပွားအနက်အရတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် အကြီးအကျယ်ဖြစ်စေ၊ တရားလွန် တရားမင်းဖြစ်စေ ချစ်တဲ့ စိတ်ကိုလည်း Nationalism လို့ ခေါ်တယ်လို့ အဘိဓာန်က ဖွင့်ဆိုပေးထားတယ်။
အဲတော့ National Day ဆိုတာဟာ ကျွန်တော့်သဘောအရတော့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ နေ့၊ နိုင်ငံတော်နေ့လို့ပဲ ဖွင့်ဆိုသင့်မယ် ထင်တယ်။ အမျိုးသားဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေ မပါသလို ဖြစ်နေတာကြီးကို ကျွန်တော်ဖြင့် ကလေးကတည်းက သိပ်ဘ၀င်မကျဘူး။ ခွဲခြား ဆက်ဆံလိုတဲ့ လေသံထွက်နေသလိုပဲ။
ဒုတိယတစ်ချက်က အဲဒီ့ National/Nationalism ဟာ Race/Racism ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရေး ပဓာန မဟုတ်ပါဘူး။ Patriotism ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့လည်း လုံးဝ မပတ်သက်ဘူး။ Nation လို့ဆိုတဲ့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြသူ လူမျိုး အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။
ချစ်စိတ်ကလည်း နိုင်ငံကို ချစ်စိတ်ပဲ။ သူ့ဟာသူ ဘာလူမျိုး၊ ဘာဘာသာဖြစ်နေနေ နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သဘောကို ဆောင်တယ်။
အဲဒါကိုမှ ဗမာစာသည် တို့စာ၊ ဗမာစကားသည် တို့စကား၊ တို့ပြည်ကို တို့ချစ်ပါဆိုပြီး ထအော်ခဲ့ကြတဲ့အခါ မူရင်း နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ အနက်က ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်သွားပြီး ဗမာလူမျိုးကြီး ၀ါဒ၊ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုကို တိုက်တွန်းအားပေးတဲ့ သဘော၊ မျိုးချစ်စိတ်သဘောကို ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
မူရင်း အနက် National Day သည် နိုင်ငံတော်နေ့၊ တစ်နိုင်ငံလံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေ့ ဖြစ်လင့်ကစား အစမကောင်းခဲ့တော့ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို ထူထောင်တဲ့ နေ့၊ ယောက်ျားတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပြီး မိန်းမတွေ နောက်တန်း ပို့တဲ့ နေ့လိုလို ဖြစ်သွားရလေတယ်လို့ စဉ်းစားနေမိရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်ပဲ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း မယုံကြည်မှု၊ သံသယပွားမှုများနဲ့အတူ ပဋိပက္ခတွေဟာလည်း ယနေ့ထက်တိုင် ဆက်ရှိနေရတာပါ။
အမှားဆိုတာ ပြင်ကောင်းပါတယ်။ သွားလေသူ ရှေးလူများကို အားနာတာနဲ့ ရှေးက အမှားတွေ မပြင်ဘဲ ထားမိနေသမျှ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်က အကျည်းတန်နေဦးမှာကို မြော်မြင်မိရင် ပြင်သင့်တာတွေကို ပြင်ချင်စိတ်များ ရှိဖို့ လိုမလားပဲလေ။
TQ..EXCELLENT comment. Although I amamixed blooded Muslim and away from the country for 28 yrs, I dare to challenge the top generals to swear holding the relevant religious scriptures regarding love to our country, Myanmar. I am sure I love the country not because I get the power or I could use the country to get any personal gain for me. (For the generals they cannot deny their personal interest and gain.)
Tags: Asia, Muslim, Myanmar, National Day, Nationalism, Politics, Theory
This entry was posted on November 27, 2013 at 4:20 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.